Dzimwe nyanzvi dzinoti kurwadziwa kunoita munhu kunochinja nekufamba kwenguva, asi chokwadi ndechekuti vanhu vanosiyana. Vamwe pavanofirwa vanozvishingisa kunyange zvazvo vachirwadziwa. Kubvuma kuti wafirwa uye kuchema kunoita kuti usanyanya kushungurudzika uye vanhu vanozviita nenzira dzakasiyana-siyana. Zvinoenderana netsika, unhu hwemunhu, zvaakasangana nazvo muupenyu uyewo mafiro aita munhu wacho.
NDICHARWADZIWA KUSVIKA PAPI?
Vamwe pavanofirwa havazivi kuti zvii zvichaitika. Asi pane zvimwe zvakajairika zvinoitika kune vakawanda. Zvimwe zvacho ndeizvi:
Kukundwa neshungu. Unogona kuchema, kusuwa munhu wacho akashaya, uye kungoerekana usingachadi zvekutaura nevamwe. Kushungurudzika kwacho kunogona kuwedzera kana pakaita chinhu chinokufungisa nezvake kana kuti paunomurota. Paunotanga kunzwa nezverufu rwacho unogona kuvhunduka uye kumbozviramba. Tina akangoerekana afirwa nemurume wake Timo uye anoti, “Pakutanga ndakatadza kuzvibvuma. Misodzi yakaramba kubuda. Ndakarwadziwa zvekuti dzimwe nguva ndaitadza kufema. Ndakatadza kuzvitambira.”
Kuzvidya mwoyo, hasha uye kuzvipa mhosva. “Mwana wedu Eric paakashaya aine makore 24 ini nemudzimai wangu Yolanda takamboita kanguva tiine hasha,” anodaro Ivan. “Izvi zvakatishamisa nekuti hatina kumbobvira tafunga kuti tiri vanhu vane hasha. Takazvipawo mhosva tichiti pamwe pane zvimwe zvataigona kunge takaita kuti mwana wedu asafa.” Alejandro akambozvipawo mhosva pashure pekunge ashayikirwa nemudzimai wake uyo ainge arwara kwenguva refu. Anoti: “Pakutanga ndaifunga kuti pamwe ndiri munhu akaipa ndosaka Mwari akarega mudzimai wangu achifa. Ndakatangazve kuzvipa mhosva yekuti ndiri kupomera Mwari.” Kostas ambotaurwa munyaya yekutanga anoti: “Dzimwe nguva ndaigumbukira Sophia nekufa kwaakaita. Ndaibva ndatanga kuzvitongesa. Yakanga isiriwo mhosva yake.”
Kuvhiringidzika pfungwa. Dzimwe nguva unoita sekunge kuti pfungwa dzava kurasika. Unogona kufunga kuti hama yako yakashaya uri kuiona kana kuti uri kuinzwa. Unogona kuita hanganwa kana kuti kutadza kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete. Tina anoti: “Dzimwe nguva ndaiti ndichitaura nemunhu ndozoona kuti pfungwa dzangu dzanga dzisitombori ipapo! Dzainge dzichitofunga nezvekufa kwaTimo. Kutadza kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete kwaitoita kuti ndinetseke.”
Kusada kuva nevamwe. Kostas anoti: “Pandaiva nevanhu vakaroorana ndainzwa sekuti handikodzeri kuvapo. Pandaiendazve pane vasina kuroora ndainzwa sekuti handikwani zvekare.” Yolanda wekushayikirwa nemwana anoti: “Zvakanga zvisingatinakidzi kutandara nevanhu vaingochema-chema nematambudziko ataiona sekuti madiki kana tichienzanisa needu! Kunewo vamwe vaitiudza nyaya dzine chekuita nevana vavo. Ndaifarawo navo asi mumwoyo ndairwadziwa. Ini nemurume wangu taiziva kuti tinofanira kuenderera mberi neupenyu asi zvakanga zvakatiomera.”
Dambudziko reutano. Zvinowanzoitika kuti unogona kusada kudya kana kuti kutanga kudyisa, kufuta kana kuonda kana kuti kuita dambudziko rekurara. Pashure pegore, baba vake vashaya, Aaron anoti: “Hope dzairamba kubata. Mazuva ese ndaimuka pakati peusiku ndichifunga baba vangu.”
Alejandro akatanga kurwara-rwara. Anoti: “Ndakaenda kwachiremba kakawanda uye ndaiudzwa kuti handina chirwere chandiinacho. Ndakafunga kuti kushungurudzika kwandaiita ndiko kwaiita kuti ndinzwe sendiri kurwara.” Asi zvakazopera. Asi zvakaitwa naAlejandro zvekuenda kwachiremba zvakanga zvakanaka. Kushungurudzika kunogona kuita kuti muviri uve nyore kubatwa nezvirwere kana kutowedzera zvanga zvagara zviripo.
Kuomerwa nekuita mamwe mabasa. Ivan anoti: “Kunze kwekungoudza hama neshamwari nezverufu rwaEric, taifanira kuudzawo waaishandira uye muridzi wepamba paaigara. Pane mapepa akawanda aifanira kufambirwa. Taifanirawo kuona kuti todii nezvinhu zvaaishandisa. Kuita zvese izvi kwakanga kusiri nyore nekuti panguva iyoyo pfungwa dzedu dzainge dzakatoneta uye takatovhiringidzika.”
Kune vamwe, dambudziko rinozovapo nderekuita mamwe mabasa aiitwa nemufi. Ndizvo zvakaitika kuna Tina. Anoti: “Timo ndiye aienda kubhengi nekuona nezvebhizinesi redu. Panguva iyoyo ndini ndakanga ndava kufanira kuzviita, uye zvakatowedzera nhamo pane yandanga ndagara ndiinayo. Ndaizvibvunza kuti ndichazvigona here kana kuti ndichatovhiringa zvinhu?”
Matambudziko ataurwa pamusoro apa anogona kuita kuti ufunge kuti dambudziko rekufirwa rakaoma zvekuti haukwanisi kuritsungirira. Chokwadi ndechekuti paunofirwa unotomboita kanguva zvichikushungurudza, asi kuziva izvi kunogona kutobatsira vaya vachangobva kufirwa. Yeuka kuti hakusi kuti munhu anenge afirwa achatosangana nematambudziko ese aya. Uyezve kuziva kuti munhu wese agara anotomborwadziwa kana achinge afirwa, kunonyaradza.
NDICHAZOMBOFARA ZVEKARE HERE?
Zvaunofanira kutarisira: Marwadzo auinawo achadzikira nekufamba kwenguva. Hazvirevi hazvo kuti unenge usingachatorwadziwi kana kuti unenge wakanganwa hama yako. Asi zvishoma nezvishoma, bundu ranga riri pamwoyo rinotanga kuserera. Marwadzo anogona kudzoka kana pakaita zvimwe zvinhu zvakufungisa hama yako. Nekufamba kwenguva, vakawanda vanosvika pakukwanisa kuenderera mberi neupenyu. Izvi zvinogoneka kana hama neshamwari vachikubatsira uye iwe uchiedzawo kuita zvinhu zvinoita kuti usanyanya kurwadziwa.
Zvichatora nguva yakareba sei? Kune vamwe zvinogona kungotora mwedzi mishoma kuti marwadzo adzikire. Kune vakawanda zvinotoda gore kana makore maviri. Asiwo kune vamwe zvinotoda anopfuura ipapo. * Alejandro anoti, “Ini ndakaramba ndichirwadziwa zvakanyanya kwemakore matatu.”
Iva nemwoyo murefu. Ita zvaunogona uye ziva kuti marwadzo auinawo achapera. Pane zvinhu zvaunogona kuita here zvinogona kukubatsira kuderedza marwadzo uye kuti usaramba uchingoshungurudzika?
Munhu wese anotorwadziwa kana achinge afirwa
^ ndima 17 Vamwe vashoma ndivo vanoramba vachingoshungurudzika kwenguva refu. Vanhu vakadaro vangada kunoona chiremba.
Pane mazano ari kubatsira vakawanda vanenge vafirwa uye ari kuvanyaradza.